Coronavirus Mihoatra ny 100 ireo voa
Tafiakatra 102 ireo olona tratry ny coronavirus eto Madagasikara.
Ny alakamisy hariva dia nisy olona 2 voatily, ary omaly kosa dia niampy 7 izany ka olona 9 izany no olona vaovao voamarina fa voan’ny coronavirus, araka ny tatitry ny Mpitondra tenin’ny CCO Covid-19 eny Ivato dia ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Tafiakatra 102 izany ny olona rehetra voa hatramin’izay. Mijanona ho 11 ny sitrana ka 91 izany ireo mbola tsaboina sy arahi-maso. Tsy misy ny mampiseho soritr’aretina sempotra. Tsy nisy izany ny nila “oxygène” sy “réspirateur”. Lehilahy 26 taona sy 41 taona izay samy eto Antananarivo ireo roa voalohany. Ny 7 kosa dia lehilahy iray 65 taona tonga tamin’ny zotra avy any ampitan-dranomasina, ary ny 6 dia any Toamasina avokoa: Vehivavy 19 taona, vehivavy 44 taona, vehivavy 51 taona, lehilahy 36 taona, zazalahikely 4 taona sy 12 taona. Rehefa tafiditra amin’ny vantan’ny olona iray ny tsimokaretina, dia na miseho ny soritr’aretina na tsia. Samy mamindra ireo, ka izay no hanarahi-maso sy hitsaboana azy. Ho an’ireo tsy misy soritr’aretina, rehefa ao anatin’ny 15 andro dia manao ilay fitiliana PCR eny amin’ny IPM. Raha tsy ahitana ny tsimok’aretina intsony izy, dia haverina indray io afaka 48 ora, ary mbola atao TDR (Test de Diagnostique Rapide) ahitana ny hery fiarovana sy ny tsy fitondrana intsony ny tsimok’aretina. Ho an’ireo misy soritr’aretina, ary farafahakeliny 8 ora no tsisy soritr’aretina, ary rehefa tsy misy izay soritra izay 3 andro misesy dia atao fitiliana PCR in-droa misesy ihany koa, arahin’ny TDR. Tsy maintsy mbola manaraka fepetra tahaka ny rehetra ireo efa olona avy sitrana. Nisaotra sy nankasitraka ireo mpikatroka manerana ny Nosy, mifampiantso sy mifampizara traikefa amin’izy ireo ny avy amin’ny CCO Covid-19 eny Ivato. Nanentana ny rehetra hanaja hatrany ny fepetra ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle satria tena mbola ao anatin’ny ady izao, ary finiavana be ny an’ny mpiasan’ny fahasalamana.